Dilalka Soomaalida South Africa oo laga shiray | KEYDMEDIA ONLINE
Kulanka ayey si weyn labada masuul diirada ugu saareen dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee dalkaasi ka dhacay, gaar ahaan tacdiyadii isugu jiray dilalka iyo dhaca ee dadka soomaalida loogu gaystay dalkaasi.
SOUTH AFRICA - Waxaa Maalmihii ugu danbeeyey kordhay dilalka iyo dhaca loo gaysanayo Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika. Dalkan ku yaala Koonfurta hoose ee Qaarada Afrika ayey 10-kii sano ee ugu danbeysay si aad ah u tagayeen Bulshada Soomaalida ah, kuwaasi oo halkaasi ka sameystay ganacsiyo waa weyn.
Bulshada Soomaalida oo ah dad ka dhaq dhaqaaq badan kuwa Koonfur Afrikaanka, ayaa fursadaha dhaqaale ee ay heleen waxa ay keentay in lagu colaadiyo, islamarkaana qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda dalkaasi ay u arkaan dad ka faa'iidaya dalkooda halka iyagu ay yihiin bulsho sabool ah oo ay shaqo la'aani dilootay.
Fikradahaasi iyo kuwa kale waa arimaha rasmiga ah ee loo sababeynayo tacadiyada joogtada noqday ee halkasi loogu gaysanayo dadka Soomaaliyeed,waxana ay si joogta ah ula kulmaan dil, dhac iyo boob.
Hadaba Kulan arintaasi iyo waxyaabo kale looga hadlay ayey Magaalada Nairobi ku yeesheen Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka kenya Maxamuud Axmed Nur Tarsan iyo Safiirka Koonfur ee Soomaaliya u jooga Mninwa Jahannes Mahlangu.
Tarsan ayaa sida uu warbaahinta u sheegay la wadaagay Safiirka Koonfur Afrika u fadhiya soomaaliya, xaalada amaan darri ee ay ku sugan yihiin ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi ku nool,isagoo ka dalbaday in arintaasi si deg deg ah looga jawaabo.
Safiirka Koonfur Afrika ayaa dhankiisa tilmaamay in arintaasi aan la aqbali karin, isla markaana ay Dawladiisa hada wixii ka danbeeya looga fadhiyo bad baadinta dhiiga iyo hantida dadka Soomaalida oo iminka u muuqda mid si macno darro ah loo daadinayo.
Kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay adkeynta xiriirka ay labada dowladood lee yihiin iyo sidii loo dar dar galin lahaa wada shaqeynta ka dhaxeysa Soomaaliya iyo Koonfur Afrika.
Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika oo dalkooda uga soo tagay xaalada amni darro ayaa si joogta ah ula kulmaya nabad galyo xumo u dhiganta tii ay uga soo carareen dhulkooda hooyo, mana jirto cid muuqata oo si rasmi ah uga jawaabeysa dhibaatada hareysay.